Puntland oo Galmudug kala shiraysa wada-shaqaynta dilalka dhex-mara reer miyiga Mudug (Sawirro) – Radio Daljir
Puntland oo Galmudug kala shiraysa wada-shaqaynta dilalka dhex-mara reer miyiga Mudug (Sawirro)
Seteembar 15, 2013 6:02 b 0
Gaalkacayo, September 15, 2013 – Wasiirka amniga iyo DDR-ta Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa maanta kulan balaaran la qaatay hay?adaha kala duwan ee maamulka iyo nabbadoonada gobolka Mudug, kadib kulan saacado badan socday oo ka dhacay Galkacayo.
Kulanka ka dhacay Galkacayo ayaa ku saabsanaa kala xog-qaadasho inteeda badan lagu eegayey arrimaha amaanka gobolka iyo kan degmada Galkacayo, iyadoo ay goob joog ahaayeen masuuliyiin sar sare oo ka tirsan Puntland sida wasiir ku xigeeno iyo saraakiil ciidan, maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa kulanka qeyb ka ahaa.
Wasiirka amniga ee Puntland Khaliif Ciise Mudan ayaa kulanka ka sheegay in ay shirar la qaadan doonaan maamulka Galmudug, iyadoo ay ka wada-hadli doonaan adkaynta amaanka iyo xalinta dilalka ka dhaca miyiga gobolka ee aanooyinka ku salaysan.
Wuxuu intaas ku daray wasiirka amniga Puntland in ay kormeero shaqo ku tegi doonaan deeganada hoos yimaada xaruunta gobolka Mudug ee Galkacayo, si loogu kuur galo xaalada guud ee dhinaca nabad-gelyada iyo shaqada dowladda ee socota.
Nabbadoona kulanka joogay ayaa sheegay in ay kaalin weyn ka qaatan mar kasta nabad-gelyada iyo xasiloonida haatana ay sii kordhin doonaan dadaalka iyo howsha dib-u-heshiisiinta beelaha reer miyiga ah ee gobolka.
Baahin: Axad, 15- Sep 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdifataax Cumar Geeddi ~ Daljir ~ Galkacyo
Puntland oo furtay weji kale oo Talaalka dabaysha kaas oo ay helayaan 495 kun oo caruura (MAQAL)